ကံကြမ္မာက သားကိုမျက်နှာလွှဲရင်း ဆူးခြုံထဲပစ်ချ
သားဖောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာ ခလုတ်တွေလည်းများခဲ့ရပါတယ် မေမေ…
ရှိစုမဲ့စုမာနတွေသာ တတိတိနဲ့ပွန်းပဲ့လာခဲ့ရတယ် မေမေ…
သားရဲ့နှလုံးသားပြက္ခဒိန်မှာတော့ မေမေနေ့တိုင်းရှိနေတာပေါ့ မေမေ….
”အနန္တလိုကြီးမြတ်သော မေမေ အမြဲနေကောင်းပါစေ”…။
Posted by ဆောင်းယွန်းလ at 8:32 AM
ဦးဆောင်ယွန်းကြီးက စပ်ထားတာတော်လိုက်တာ။ သိပ်ကောင်းတယ် တကယ်ပြောတာ။း)
အမေအကြောင်းရေးထားတာတွေလိုက်ဖတ်ပြီး အမေ့ကိုလွမ်းနေတာ အစ်ကို့ကဗျာဖတ်ပြီး ပိုလွမ်းသွားတယ်။ အစ်ကို့ အမေရော၊ ညီမအမေရော၊ အားလုံးရဲ့အမေတွေကျန်းမာပါစေလို့ အမေများနေ့မှာ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော အစ်ကိုလည်း အိမ်ပြန်ရပါစေ။
ကိုဆောင်းရေ အကိုကြီးရယ့်မေမေနဲ့ အကိုတို့အမြန်ဆုံး
တွေ့ဆုံနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် အကို။
ထိရှသွားတဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ ညီရေ့...
တစ်ပိုဒ်လုံးကို ကောင်းနေတာပါအကို ...
ှုဦးဆောင်းရေးတဲ့ ကဗျာတွေကတော့ .. အမြဲခမ်းနားနေတော့တာပါပဲ...
အမေအတွက်ရေးတဲ့ကဗျာ ဆိုတော့ အခမ်းနားဆုံးပေါ့..လေ
ကောင်းလိုက် တဲ့ ကဗျာလေး..
မောင်လေး. ရေ ...ရေး တတ်လိုက် တာ..
မနေ့ က တစ်နေ့ လုံး နဲ့..ဒီ နေ့ ရောပဲ
အမေ ကဗျာတွေ ချည်း ပဲ လိုက် ဖတ် နေခဲ့ တာ..
..မောင်လေး က ဒီလောကကြီး ထဲ ခေါ် စရာ အမေ ရှိသေး တာ.. တော်သေး တာပေါ့ ကွယ်..
အမေ့ ကို ချစ် တယ် ဆို....
အမေ ကြိုက်တာလေး တွေ နဲ့... ဘ၀ ကို..
ပုံဖော်သွား ရင်... အမေ ပျော် နေမှာ ပါ.....
ဒီ ကဗျာလေး.. မောင် လေး ရဲ့ မေမေ ဖတ် ဖြစ် ရင် လဲ..
ဘယ်လောက် များ ပီ တိ ဖြစ်လိုက် မလဲ...
ဒီ စာပိုဒ်လေး ကို တော့...
မေမေ ကြိုက်လိမ့် မယ် မထင် မိဘူး...
ယုံ ကြည် ချက် တွေ မပျက်စေနဲ့ လေ....
အရာရာ.. အဆင်ပြေ ပါစေ ကွယ်.........
အကိုဆောင်းယွန်း.. မေမေကဗျာလေးဖတ်ပြီး... အဝေးက အမေ့ကိုသတိရမိတယ်.. နောက်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်း အမေနေရာကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ .. အကောင်းဆုံးပေးဆပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင် ကျိုးစားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားမိတယ်။ ဒါဆို..မေမေကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်။